Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 31, 2020 03: 33 Awekho amazwana
Ngemuva kokulahlisa isithunzi noFally Ipupa futhi aziqhenye ngalesi sithombe nabangane bakhe ingabe le ntombazane izuze ini? Namuhla, ... Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 31, 2020 00: 22 Awekho amazwana
Bafowethu nani dadewethu, ake nibheke ukuthi le ntokazi yakudala, u-Olive Lembe Kabila, egqoke kanjani ngesikhathi "Kusondele iminyaka engu-2009", kuyihlazo ukuthi ... Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 30, 2020 00: 50 Awekho amazwana
Ngaphezu kwakho konke, sicela uNkulunkulu weqiniso, uNkulunkulu wokhokho bethu, ukuba asithethelele zonke izono zethu. “Kwangathi ukuhlakanipha kwakhe nomoya wakhe wokuqonda kungasisiza. »Cabanga ... Funda kabanzi
Kepha, ngasikhathi sinye, umbono wokuthi umuntu onsundu / umAfrika uvinjelwe iCorona Virus usakazeka njengomlilo wasendle ezwenikazi lase-Afrika. Kukhona ... Funda kabanzi
Wonke umuntu ufuna ushintsho, kepha akekho othanda ukuzwa iqiniso: iningi labantu alifuni ukukhuluma futhi, ngokubonisa ubutha kubantu abathile, badlala abameli bakaSathane
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Januwari 12, 2020 13: 58 Awekho amazwana
Konke kuzoshintshwa, kepha akukho neqiniso: Sizoyenza kanjani i-Afrika ukuba ivele noma iguquke (iCongo) uma sivikela izimfanelo ezithile zalokhu ... Funda kabanzi
Ingabe amaCongo aphelele ebugqilini? Uma ubheka ukuthi abaseCongo baseDRC baziphatha kanjani, umuntu unomuzwa wokuthi bazalwa beyizigqila, kunjengokungathi ubugqila buthinta uhlangothi lwabo, lokho kusho ukuthi kungokwabo uqobo. lesibopho
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Okthoba 10, 2019 00: 00 Awekho amazwana
Uma ubugqila buzalwa kabusha yingxenye yamaCongo, khona-ke abakakulungeli ukuzikhulula kuwo. Ngakho-ke bazohlala ngaphansi kokuqeqeshwa kwamakhosi abo. Iqembu lezepolitiki lingayenza kanjani ... Funda kabanzi
Ku-Amida, uKamerhe ukhanyisa umlilo: ngokusho kwephephandaba, kusihlwa kweRadio Okapi ngoMeyi 31, "Ijaji uRaphaël Yanyi akafile, ngokufa kwemvelo, ubuthi ubuzosetshenziselwa ukumbulala"; yilokhu umbiko we-autopsy owenziwe ngoLwesihlanu yiqembu lodokotela eliholwa ngumkhuzi wamasosha eCamp Kokolo eKinshasa wembula ... (VIDEO)
Juni 2, 2020 00: 00